काठमाडौंमा आज तरकारीको मूल्य कति? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंमा आज तरकारीको मूल्य कति?
काठमाडौं, चैत २१ । कालिमाटी तरकारी थोक बजारमा आज (बिहिबार) मटरकोशाको मूल्य बढेको छ । बुधबार ४० देखि ४५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको मटरकोसाको ४५ देखि ५० रुपैयाँमा बिक्रि भइरहको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज ठूलो गोलभेडा पनि ४५ देखि ५० रुपैयाँ किलोमा बिक्रि भइरहेको छ । सानो गोलभेडा ४० देखि ४५, रातो आलु २१ देखि २३, सुकेको प्याज २२ देखि २५, गाँजर २० देखि २५, भेन्टा ३० देखि ३५ र बोडी ९० देखि ९५ रुपैया किलोमा बिक्री भइरहेको छ । यस्तै, तिते करेला ७५ देखि ८०, लौका ३५ देखि ४०, भिण्डी ९५ देखि १०० र पिडालु ४५ देखि ५० रुपैया किलोमा बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ ।